प्रेमको रंग - होली विशेष - साप्ताहिक
- डा. नम्रता पाण्डे
हिन्दू धर्मअनुसार राजा हिरण्यकश्यपु घमन्डी राजा थिए । उनी आफूलाई देवता सम्झन्थे, सबैले आफ्नो पूजा गरून् भन्ने चाहन्थे । उनकै पुत्र प्रल्हाद भगवान् विष्णुका भक्त थिए । आफ्ना पिताजीको घमन्ड उनलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो । यो कुरा थाहा पाएर राजा हिरण्यकश्यपुले आफ्नी बहिनी होलिकासँग मिलेर राजकुमार प्रल्हादलाई आगोमा जलाएर मार्ने विचार गरे । होलिकालाई आगोले केही गर्न सक्दैन, उनी सुरक्षित छिन् भन्ने मान्यता थियो तर प्रल्हादलाई जलाउन रचिएको अग्निमा होलिकाको मृत्यु भयो ।
होलिका अर्थात् दानव प्रवृत्तिको दहन (नष्ट) भएकाले होलिका दहनका रूपमा यो पर्वको विकास भएको मान्यता छ । वसन्त ऋतुसँगै आउने होलीले सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व पनि बोकेको छ । आखिर होलिकासँगै किंवदन्ती जोडिएर होली सुरु भएको हो भने होलिका होइन प्रेमपूर्ण महिला बनेर यो वसन्त उत्सव मनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश होलीले दिन खोजेको हुनुपर्छ ।
प्रकृति प्रद्दत सबै वस्तुमा रंगको महत्व भएजस्तै मानिसलाईं पनि रंगकै आधारमा व्यवहार नगरिने चाहिँ होइन । गजबको कुरा के भने मानिसको शरीरको रंग फरक–फरक भए पनि मुटु, हृदय एवं रगत उस्तै रंगको छ । यो रंग के पुरुष, के महिला सबैमा उही प्रेमको रंग बनेर आउनुपर्छ । यद्यपि अझै पनि मानिस धन, प्रेम, पद, सम्मान, क्रोध, मोह, लोभ आदिको रंगमा आफूलाई परिचित गराउन खोज्दा कहिले सुखी त कहिले दुःखी हुन्छ । महिला हुन् वा पुरुष, आफ्नै साथीभाइ एवं इष्टमित्रसँग खुलेर कमजोरी स्वीकार गर्न र माफी माग्न सक्दैनन् । होलीले यसलाई सहज बनाइदिएको छ । होलीको रंग साटासाट गरेर एक–अर्काको कुण्ठा समाप्त गर्ने, प्रेम र सद्भाव वृद्घि गर्ने एउटा अवसर दिएको छ होलीले । व्यस्त मात्र होइन अस्तव्यस्त जीवन बिताइरहेका मानिसहरूका लागि खुसीको रंगमा एकदिन भए पनि मस्त हुने अवसर हो— होली । वर्षभरिका तनाव रंगमार्फत फ्याँक्ने अवसर पनि हो— होली । प्रेम साटासाट गर्ने अनि शुभकामना व्यक्त गर्ने पर्व हो–होली ।
मानिसको दैनिकी र जिउने तरिका हेर्दा लाग्छ भयपूर्ण र प्रेमपूर्ण दुई तरिकाले मात्र जीवन जिउन सकिन्छ । पुरानो संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या एवं द्वेषमा जिउने मानिसहरू भयपूर्ण जीवन नै बाँचिरहेका हुन्छन् । त्यसका अतिरिक्त प्रेमपूर्ण जीवन जिउनेहरू वर्तमानको जीवन जिउँछन् । संसार सुधार्न होइन पहिले आफू सुध्रिएर त्यसको रूपान्तरण संसारमा देखाउन चाहन्छन् । मानिसको अहंकारले आफ्नो दोष अरूले थाहा पाओस् अर्थात् आफैंले थाहा पाएर पनि सुध्रिने प्रयास गरूँ भनेर सीधै प्रयासमा त ऊ जानै सक्दैन तर फागुपूर्णिमा (होली) जस्ता पर्वले मनभित्रको अहंकारलाई साथीभाइबीच रंग खेलेर भए पनि रेचन गर्न (भित्रको मैला, कुण्ठा फ्याँक्न) मद्दत गर्छ । होलीको दिन मानिस सबै कुरा बिर्सेर प्रेमको रंगमा समर्पित हुन सक्छ । ३ सय ६५ दिन संसारको भागदौड र कुण्ठा, शरीरभित्र र बाहिर संगालिएको फोहोर रंग खेलेर रंगकै रूपमा पवित्र बनाउन यो पर्वले अर्को रंग थपिदिन्छ ।
ओशो भन्नुहुन्छ– प्रकृतिमा प्रत्येक दिन होली हुन्छ । हरेक वृक्ष खुसीले नाचिरहेको हुन्छ । पुरानो पात झर्छ, नयाँ पलाउँछ । पुरानो फूल झर्छ नयाँ फक्रन्छ । नदी आफ्नो स्वरमा बहिरहन्छ । पहाड, हिमाल आफ्नो रंगमा दङ्ग छन् । आकाश, तारा, चन्ıमा, सूर्य आफ्नै मस्तीमा, आफ्नो समयमा चलेकै छन् । प्रत्येक क्षण उत्सवमय छन्, प्रत्येक दिन होली छ प्रकृतिमा । प्रकृतिका कुनै वस्तुले एक–अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । सूर्य र चन्ıमा बीच प्रतिस्पर्धा भयो भने हाम्रो स्थिति के होला ? प्रकृति आफ्नो नियममा चलिदिएन भने हाम्रो अवस्था के होला तर मानिस सम्झन्छ यी सबै व्यवस्था, यी भौतिक प्रगति हाम्रो प्रयासले भएको छ । प्राकृतिक स्वभावसँग रम्ने फुर्सद कहाँ छ मानिसलाई ? यही एकदिनको होलीले मानिसलाई हरेक समस्याबाट एकछिन भए पनि पर राख्न मद्दत गर्छ ।
होलीकै नाममा अराजकता फैलाउने र नचाहिँदो दुःख दिने संस्कार यदाकदा आज पनि विद्यमान छ । त्यस्तो उच्छृंखल व्यवहार होलीको सन्देश हुन सक्दैन । प्रेमपूर्ण, उत्सवमय रूपमा, हाँसीखेली, शुभकामना आदान–प्रदान गरेर मनाइने पर्व हो— होली । मानिसको जीवनमा अधिक सुख र अधिक दुःख आउँछ भन्ने मान्यता बनाएर बसेका हामीलाई सुख–दुःख, राम्रो–नराम्रो हामीले बनाएको मान्यता हो ।
वसन्त ऋतु, न जाडो, न गर्मी, रुख–बिरुवामा पालुवा पलाउने समय । वसन्त ऋतुजस्तै न सुख, न दुःखको स्थिति अर्थात् जीवन नै वसन्त बनोस्, जीवनलाई सिकायतका रूपमा नलिइयोस् भन्ने सन्देश पनि यो वसन्त उत्सवको सन्देश हुनसक्छ । जसरी खानामा डेजर्ट (मिठाई) ले पूर्णता दिन्छ त्यसैगरी मानिसका हरेक सफलतामा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध भएमात्र जीवनमा पूर्णता मिल्छ । बहाना होलीकै किन नहोस्, यसले प्रेमपूर्ण हुने र प्रेमको रंगमा डुब्ने कला सबैलाई सिकाउँछ ।
प्रकृतिमा जति पनि चीजको उत्पत्ति भएको छ हरेकको आ–आफ्नै विशेषता छ । हामीले प्रकृतिमा सिर्जना भएका चराचुरुंगीको रंग, फूल, रुख–बिरुवाको रंग, हिमाल, पहाड तथा कीरा–फट्यांग्राको रंग ख्याल गरेका छौँ भने त्यहाँ हरिया, राता, नीला, बैजनी, पहेँला हरेक रंग फेला पार्न सकिन्छ । रंग र अध्यात्मको सम्बन्ध त्यसरी नै जोडिएको छ । जसले हरेक रंगमार्फत प्रकृति र प्रेमको अझिव्यक्ति दिन्छन् ।
हाम्रो शरीरमा जसरी सात चत्र छन् र ती चक्रको प्रभाव सातै रंगसँग छ त्यसरी नै होलीमा खेलिने रंगले उस्तै वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महत्व राख्छन् । कसैलाई जबर्जस्ती नगरी, स्वेच्छाले र हर्ष भावले एक–अर्कामा उत्सव मनाइने वसन्तोत्सव हो— होली । कुनै पनि प्रकारको उच्छृंखलता देखाउने र जबरजस्ती मनाइने पर्व होइन होली । आनन्द प्राप्त गर्न ठूलै व्यापार, व्यवसाय गरी धन वा पद हासिल गर्नु पर्दैन । आफूसँग जे छ त्यसमा रमाउन सके, जे प्राप्त हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्न सके आनन्द मिल्छ ।
सुख र दुःख हामीले गर्ने बाहिरी कर्म र त्यसबाट प्राप्त फलको अनुभूति हो भने आनन्द स्वीकार भाव हो । स्वीकार भावमा रहने कला नजान्दासम्म सुख र दुःखका कथाबाट मुक्त भइँदैन, न त आफूभित्र शान्ति नै घटित हुन्छ । सुख र दुःख जीवनका बाहिरी रंग हुन् र यी रंग आउने–जाने भैरहन्छन् भने आनन्द भित्री रंग हो यो सधैँ मानिसभित्र विराजमान छ । यसको अनुभूति गर्ने र यसकै रंगमा डुब्ने कला जाने दुःखका रंगहरूले स्थान लिन पाउँदैनन् ।
आजै खेलौँ प्रेम रंगको होली, छैन कुनै भरोसा यो जीवनको भोलि ।